१८ महिना अघिनै फ्रि ट्रान्सफर चाहन्छन् पोग्बा ? - Kheladi News Kheladi News
१८ महिना अघिनै फ्रि ट्रान्सफर चाहन्छन् पोग्बा ?
एजेन्सी-किर्तिमानी मूल्यमा ओल्ड ट्राफोर्ड आएका फ्रेन्चम्यान पाउल पोग्बा यतिबेला खराब लयमा छन् । उत्कृष्ट प्रदर्शनको अपेक्षा क्लबले गरिरहेको छ । तर उनी आफैं खराबलयबाट गुज्रिएका छन् ।
ट्राफोर्डमा उनको समय अझै १८ महिना छ । १८ महिना समय रहेपनि उनी ट्राफोर्डबाट फ्रि ट्रान्सफरमा जान चाहन्छन् । समय नसकिदैं उनको चाहना पुरा हुने नहुने विषयमा भने म्यानचेष्टर युनाईटेडले कुनै खुलासा गरेको छैन् । उनी युनाईटेड छाड्ने सम्भावना अहिले देखिदैन् । उनको सम्झौता सकिएपछि उनी आफनो अनुकुल कुनैपनि क्लबमा जान सक्ने छन् ।
पोग्बालाई रियल मड्रिडले भित्र्याउने चाहना राख्दै आएको छ । जिनेदिन जिदानले फ्रेन्चम्यान पोग्बालाई भित्र्याउँदै क्लबलाई अझ बलियो बनाउने लामो समयदेखि प्रयासरत थिए । फ्रान्सेली फुटबलका प्रशिक्षक डिडियर डेसच्याम्पले पनि पोग्बा युनाईटेडमा खुशी नभएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । यसले पनि पोग्बा अन्यत्र जान चाहेको कुरालाई पुष्टि गरेको छ ।